Inkonzo-Beijing Ca-Long Engineering Machinery Co., Ltd.
Njengenye yezinto ezibalulekileyo ze-AMP, ukusebenza kwayo kakuhle kuyafuneka kakhulu. Uyilo lwethu ludibaniso lomxhuzulane oyintloko kunye nebhegi yesihluzo sesibini, ehlangabezana nazo zonke iimfuno zokusingqongileyo eTshayina nakumazwe aseYurophu. Ngaphantsi kweemeko zomgangatho osebenzayo, uxinzelelo lokukhupha kwindawo yokucoca umoya inokufikelela kwi-20mg / m esemgangathweni3 kwaye kungcono.
Ukuqinisekisa ukusebenza kwesihluzo, sikhetha iibhegi zokucoca ezenziwe ngezinto zaseMelika zeDupont iNomex, enexesha elide lokusebenza kunye nokusebenza ngokugqwesileyo.
Kule minyaka mibini idlulileyo, sifakile eFinland iiseti ezimbini zeefilitha ukuze sihlaziye isityalo esidala sokuxuba i-asphalt. Imveliso yethu inokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zemo engqongileyo kwaye idunyiswe kakhulu ngumsebenzisi.
Ishushu kwibhoyila yeoyile
Ibhoyila eshushu yeoyile isetyenziselwa ukufudumeza amatanki ebhitumene ngeoyile eshushu, ejikelezayo kwimibhobho yenkqubo yokufudumeza kunye netanki zebhitum. I-Boiler ixhotyiswe ngetanki lokunyuka okuphezulu kunye netanki lokugcina elisezantsi, eliqinisekisa ukhuseleko kunye nokusebenza ngokukuko.
Ngokuphathelene nesitshisi, sisebenzisene nomthengisi webranti owaziwayo kwihlabathi ovela eItali, eBaitur. Uhlobo lwepetroli lukhethwa kwioyile elula, kwioyile enzima nakwirhasi yendalo. Ukucima kunye nokulungiswa komlilo kulawulwa ngokuzenzekelayo.
Umthamo webhoyila yi-300,000 Kcal / h - 160,000Kcal / h.
Inkqubo yokudibanisa edibeneyo
Inkqubo eyongeziweyo eyongeziweyo igqiba ukuthoba kunye nokuhambisa isongezelelo. Ukufumana i-asphalt ephezulu yokusebenza, izongezo, ezinje ngeViatop, iTopcel, zinokongezwa kwinkqubo yokuvelisa i-asphalt.
Izongezo ze-Granulate zondliwa nge-hopper eyahlukileyo, okokuqala kwisisele sokugcina, emva koko ngemibhobho kunye nevalve yamabhabhathane, izongezo ziya kungena kwi-hopper enobunzima. Ngoncedo lwekhompyuter yokulawula, izongezo ziya kufakwa kumxube.
Isityalo seCa-Long sinezixhobo zokuthengisa ezaziwayo emhlabeni, ezinobomi obude.
Njengesiqhelo, sinezitokhwe zazo zonke iintlobo zezinto zokuncedisa abaxhasi kwiimfuno zongxamiseko lomthengi, ukuze umxhasi wethu afumane izibonelelo ngokukhawuleza okukhulu ngendlela yomoya.
Eyona nto iphambili kwinkqubo yolawulo lweCa-Long ye-AMP kukudibana komatshini womntu onobuhlobo, odunyiswa kakhulu ngabasebenzisi beCa-Long AMP. Sinokubonelela ngenkonzo yokuhlaziya inkqubo kwi-AMP yalo naluphi na uphawu ngesiNgesi okanye ngolwimi lwaseRussia.
Ngophuhliso lwamashishini e-AMP, isityalo esidala siza kuhlaziywa ukuze sihlangabezane neemfuno ezintsha kwaye sigcine iindleko ekuthengeni isityalo esitsha. Okokuqala, sinokubonelela ngalo naliphi na icandelo le-AMP ukuthelekisa isityalo esidala. Okwesibini, sinokongeza inkqubo ye-RAP kuyo nayiphi na i-AMP yakudala yokugcina iindleko zokuvelisa. Okwesithathu, nayiphi na i-AMP ingahlaziywa kwisityalo esinohlobo lokusingqongileyo ukuhlangabezana neemfuno ezintsha zokusingqongileyo.